Warbaahinta Sweden, Soomaalida iyo abaaraha Soomaaliya | Somaliska
Warbaahinta Sweden, Soomaalida iyo abaaraha Soomaaliya
Iyadoo isbuucyadii ugu dambeeyay ay Soomaalida Sweden abaabul weyn oo magaalo kasta ah sameeyeen sidii gurmad loogu arurin lahaa Soomaalida ku dhibaateysan macaluusha ka dilaacday gobolo badan oo Soomaaliya ah.
Ayaa maalmahaan waxaa sidoo kale bilowday abaabulka lagu qaadayo xaga warbaahinta iyo dadka Swedishka ah si loo balaariyo fahanka ay ka qabaan arintaan isla markaana loogu dhiiri galiyo in si bani’aadanimo ah ay uga qayb qaataan.
Abshir Macow oo ah gudoomiyaha jaaliyada Bohuslän ee ka dhisan magaalada Uddevalla ayaa mar uu la hadlaayay Sverige Radio u sheegay “Ma ahan in ay taageeradu noqoto malaayiin ama boqolaal kun. Xitaa waxay noqon kartaa 1 karoon, boqol ama shamboqol. Waxaad ku taageeri kartaa shacabka Soomaaliyeed xitaa 1 karon”
Sidoo kale Soomaalida ku nool magaalada Jönköping ayaa ka mid ah kuwa bilaabay ololaha warbaahinta iyagoo la hadlay idaacada SR qaybta Jönköping.
Sidoo kale wargeyska ka soo baxa Katrineholm ee lagu magacaabo Kkuriren ayaa lagu soo qoray codsi ku qoran Swedish iyo Soomaali oo lagu dalbanayo badbaadada dadka macaluushu haleeshay.
Ma ahan koonfurta oo keliya balse sidoo kale waxaa ololaha warbaahinta uu ka socdaa waqooyiga iyada oo reer Sundsvall ay sidoo kale warbaahinta la xiriireen. Waa arin muhiim ah oo loo baahanyahay in la ogeysiiyo warbaahinta iyo shacabka Sweden xaalada dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya.
Anaga keliya ma samata bixin karno maalaayiinta ku dhibaateysan Soomaaliya balse haddii aan la kaashano bani’aadamka kale waxaa la heli karaa taageero wax ku ool ah. Swedishka waa dad aaminaad badan oo haddii si toos ah loo weydiiyo in ay taageero dhiibaan bixinaya.
Ama waxaa la sameyn karaa sidii ay sameeyeen dhalinyaro ku nool magaalada Kisa ee u dhow Linköping in la taageero haydaha caalamiga ah sida LaanKheyrta cas oo magacooda lacag lagu ururiyo.
Xisbiga cunsuriga ah, Sverigedemokraterna, oo wacad ku maray in uu taageeri doono hadalkii wasiirka socdaalka
“Soo galootigu waa in ay u guuraan halka shaqadu ka jirto”
“Qaxootiga yaan la siinin baasaboorka Sweden, cayrtana ha laga goosto”
August 6, 2011 at 22:37
Waanidin wada salaamay, Run ahaantii aad ayay u wanaagsan tahay in laga danqado dhibaatada ku habsatat wadankeeni gaajada iyo macluusha , waxaan aad ugu mahadcelinayaa Qaasatan Abshir Macow oo siiyay wareysi Sverige Radio oo tusay in caawinaadu tahay xitaa 1 krone, Waxaa kaloo aad u mahadcelinayaa Soomaalida ku Nool Magaalada Jonköpin oo ayagana bilaabay Warbaahinta, Waxaa kaloo u mahadcelinayaa dadkii qoray wargeyska katrinaholm, dadaalka aan sii wadno.
aan u duceyno inuu dhibaatada ka saaro dadkeena gaajeysan.